Ireo mpiorina OS X talohan'ny volana febroary 2016 dia nijanona tsy niasa | Avy amin'ny mac aho
Androany raha mety tonga ao an-tsainao ilay andian-teny ... »Tsy nisy izany tamin'i Steve Jobs» ary toa nandeha ny taona sasany misy lafin-javatra izay mbola tsy nisy mihitsy tamin'ny kinova OS X voalohany raha omena izany izao. Miresaka momba ny mari-pankasitrahan'ny installer OS X. Rehefa misintona ny mpampiasa avy amin'ny Mac App Store rindranasa iray ao anatin'izany ny OS X mihitsy ao amin'ireo kinova samihafa, io installer io dia azo hamarinina amin'ny lohamilin'i Apple
Izany indrindra no olana sedrain'ireo mpampiasa manana installer OS X alohan'ny febroary 2016. Hitan'izy ireo fa tsy afaka mametraka ny rafitra izy ireo. satria ilay mpiorina iray ihany dia manome hadisoana mifandraika amin'ny fahataperan'ireo mari-pankasitrahana amin'ny lohamilin'i Apple manokana.
Ireo an'ny paoma manaikitra dia namela ny taratasy fanamarinana momba ny fampiharana izay hita ao amin'ny Mac App Store ho tapitra ary toy izao, raha toa ianao ka nisintona mpampiditra OS X amin'ny kapila mafy ampiasainao hampiasa azy io rehefa heverinao fa mety na namorona pendrive USB fametrahana ianao, tsy maintsy ataonao ny tsy misy azy ireo ary misintona ny tsimbadika farany an'ny installer ilainao indray.
Vao tsy ela akory izay dia fantatra fa tsy nahomby ireo mpampiditra fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo noho ny fahataperan'ireo mari-pankasitrahana ary ho an'ity manokana Apple dia tsy maintsy niatrika tamin'ny famoronana mari-pankasitrahana vaovao hamela ny fametrahana ireo rindranasa ireo nefa tsy manome olana.
Ny olan'ny fanamarinana dia tonga amin'ny teboka toy izany fa ny kinovan'ny rafitra OS X Lion dia tsy azo alaina amin'ny fitaovana maoderina indrindra napetrak'i Apple eny an-tsena, ka tsy mila mampiasa afa-tsy ny rafitra farany indrindra, OS X El Capitan. Araka ny fantatsika, tsy mbola nisy izany ary ny kinova Mac dia napetraka talohan'ny OS X ankehitriny.
Apple dia efa miasa manitsy ireo lesoka ireo tamin'ny famoronana mari-pankasitrahana vaovao. Na izany aza, raha mbola tsy te hiandry ny vahaolana hivoahany ianao dia azonao atao ny mamitaka ny installer amin'ny alàlan'ny fanovana ny datin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny fanoratana:
Ka raha manandrana mampiasa installer ianao ary manome anao hadisoana hatrany dia fantatrao hoe inona ny vahaolana mety mandra-pahatongan'ny Apple mandray andraikitra momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Ireo mpikirakira OS X talohan'ny volana febroary 2016 dia nijanona tsy niasa
Raha atao teny vitsivitsy dia tsy afaka manova ny kapila an'ny mac ho sed aho aho, satria tsy mandeha amiko ilay pendray vokariny.